Justin Amash: Madaxweyne Trump wuxuu Soomaaliya ka fuliyey duqeymo badan oo dad lagu laayey | Xaysimo
Home War Justin Amash: Madaxweyne Trump wuxuu Soomaaliya ka fuliyey duqeymo badan oo dad...
Justin Amash: Madaxweyne Trump wuxuu Soomaaliya ka fuliyey duqeymo badan oo dad lagu laayey
Justin Amash oo ka tirsan Aqalka Wakiilada Mareykanka ayaa ayaa ku eedeeyey madaxweyne Donlad Trump inuu duqeymo badan oo dhanka cirka ah ka fuliyey Soomaaliya, kuwaasi oo dad badan lagu laayey.
Justin Amash ayaa ku doodaya in madaxweyne Trump uu jabiyay rikoore uu awoodi waayey madaxweynihii hore ee Mareykanka, Barack Obama.
Mareykanka ayaa 2019-kii gudaha Soomaaliya ka fuliyay duqeymo dhan 63, taasi oo ka dhigeysa tiradii ugu badneyd ee duqeymaha uu Mareykanku tan iyo sanadii 2011-kii.
“Madaxweynaha dagaal-diidka ah ee Donald Trump ayaa bilaabay duqeymo ka badan kuwa cirka iyo kuwa aan duuliyaha laheyn ee Soomaaliya sanadkii ugu dambeeyay marka loo eego inta uu Barack Obama fuliyay dhamaan sideedii sano,” ayuu ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka.
Dhowrkii sanno ee u dambeeyay waxa marba marka kasii dambeysa sarre u kacayey duqeymaha uu Mareykanku ka fuliyo gudaha Soomaaliya, tan iyo markii uu xilka la wareegay Donald Trump.
Mareykanka ayaa muddooyinkii dambe galaan-gal xoogan kulahaa arrimaha Soomaaliya, xili lagu tirinayo inuu yahay ‘gacan siiyaha u weyn’ ee dowladda federaalka Soomaaliya, marka loo eego dhanka amniga iyo arrimaha deeq bixinta.